Global Voices teny Malagasy » Espaina: Lahatsary Manaporofo Ny Herisetran’ny Polisy Nandritra Ny Fitokonana Faobe Tamin’ny 29 Marsa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Avrily 2012 15:24 GMT 1	 · Mpanoratra Chris Moya Nandika (fr) i Alice Floury, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Andrefana, Espaina, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Sendikà
|Amin'ny teny espanola avokoa ny rohy rehetra raha tsy misy ny filazana manokana] Tamin'ny #29M  (29 martsa), niantso ho amin'ny fitokonana faobe ho fanoherana ny fanovana ny lalàna mifehy ny asa [amin'ny teny frantsay] nataon'ny governemantan'i Mariano Rajoy (Parti Populaire) ny sendikà espainola. Fitokonana voalohany hatrehin'ny governemanta izany, tao anatin'ny 100 andro monja nandraisany ny asany. Niteraka fihetsiketsehana goavambe teny an-dalambe manerana ny firenena ny fepetra noraisina vao haingana. Ho fampitsaharana haingana ny krizy, nasian'ny fitondrana fanamboarana ny tsenan'ny asa, nahena arak'izany ny sandan'ny fandroahana mpiasa, nomena tombony ny orinasa hanitatra ny ora fiasana sy hampidina ny karama, entanina ny faharisihan'ny mpiasa sy ny fanamorana ny fandraisana ny tanora hiasa hianatra mandritra ny fe-potoana nohalaivana.
Vondron'olom-pirenena, tsy mpikambana ao amin'ny sendikà maro an'isa, tahaka ny ¡Democracia Real Ya! no tonga nanatevin-daharana ny hetsika ihany koa . Nafampana tanteraka ny hetsika, indrindra tao Barcelone, izay nahitana fifandonana teo amin'ny polisy misahana ny rotaka sy ny mpanao fihetsiketsehana. Mbola tsy nitondra marika famantarana azy ihany ny polisy tamin'ity indray mitoraka ity.
Amin'ireo lahatsary anankiroa nalain'ny mpikatroka, afaka manamarika isika fa mihazona kobay mandeha amin'ny herinaratra ny polisy. Ahitana polisy roa mandositra (ireo any aoriana indrindra), amin'ny lahatsary nalaina voalohany, ary odidinin'ny mpanao fihetsiketsehana izy ireo. Mampiseho herisetra nataonà polisy efatra (vehivavy ary lehilahy telo) aminà mpanao fihetsiketsehana nianjera tamin'ny tany, sy ny fandosiran'ireo roa hafa ny lahatsary faharoa izay nalaina tamin'ny zoro ampita kosa . Nanamarika ireo mpanao fihetsiketsehana fa mody mitsofoka any anatin'ny hetsika ny vondrona polisy, ary manao herisetra amin'ny mpanao fihetsiketsehana ka mody manaratsy ny hetsika mba hilazana fa tsy diso izy ireo amin'ny famoretana ataony.(loharano: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article35508 )
@ARMAKdeODELOT : TENA RATSY- AELEZO @DemocraciaReal : Tanora 19 taona tsaboina maika, mampanahy ny toe-pahasalamany, fahatapahan'ny lalan-drà amin'ny atidoha noho ny vono nataon'ny polisy taoVitoria #29M 
@Fotomovimiento : Ao amin'ny Plaça Catalunya ny polisy namantsika.. Ary arovan'ny Trias amin'izany izy ireo..Tsy mendrika! #29M http://www.youtube.com/watch?v=V_bLULITkh4 
Nilaza ny mpitsara niantsoroka ny raharaha fa mety hamerina ny nataony izy ireo, satria mety hanohintohina ny filaminam-bahoaka mandritra ny tranga hafa ao Barcelona amin'ny herinandro ambony ireo voampanga . Namoaka fanambarana ho fiarovana ireo gadra  ny fikambanana isan-karazany eo amin'ny sehatry ny fitsarana. Ao an-tanàna maro ao Espaina, misy ny hetsi-panoherana ny fanagadrana ireo mpanao fihetsiketsehana.
Nisy ny vohikala  natsangana handraisana ireo fijoroana vavolombelona mikasika ny herisetra tsy ara-drariny niseho nandritra ny andron'ny fitokonana tamin'ny 29 martsa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/04/11/31918/
 fitokonana faobe ho fanoherana ny fanovana ny lalàna mifehy ny asa : https://fr.globalvoicesonline.org/2012/03/30/103691/
 tonga nanatevin-daharana ny hetsika ihany koa: http://www.democraciarealya.es/blog/2012/03/16/apoyo-de-democracia-real-ya-a-la-huelga-general-dentro-del-bloque-critico/
 fanambarana ho fiarovana ireo gadra: http://www.acampadadebarcelona.org/index.php/ca/acampadabcn/item/658-comunicat-conjunt-en-defensa-dels-vaguistes-en-pres%C3%B3-sense-judici